संचारकर्मी नरेश भट्टराईसंग सवाल जवाफ : किन उनकी श्रीमती फिल्मक्षेत्रबाट टाढिईन ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentसंचारकर्मी नरेश भट्टराईसंग सवाल जवाफ : किन उनकी श्रीमती फिल्मक्षेत्रबाट टाढिईन ?
March 17, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Interview, Videos 0
पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराईले आफ्नी हिरोइन श्रीमतीलाई फिल्म क्षेत्रबाट किन टाढा राख्नु पर्यो भन्ने बिषयमा मुख खोलेका छन् । करिब सात बर्ष अघि पत्रकारिता गर्ने क्रममा हिरोइन मुना कार्कीसंग प्रेममा परेका नरेशले विवाह पश्चात मुनालाई फिल्म लाईनबाट चट्क्कै टाढा राखे ।
यसो हुनुमा स्वयम नरेशको व्यक्तिगत चाहना थियो वा स्वयम मुना आफैले फिल्म नगरीबाट टाढा हुने ईच्छा देखाईन ? यी र यस्तै प्रश्नहरु गर्दै पत्रकार भट्टराईसंग सुत्र ईन्टरटेन्मेन्टले अन्र्तवार्ता लिएको छ । निकै ब्यस्त सञ्चारकर्मीका रुपमा चिनिने नरेश गीतकार र फिल्म लेखकका रुपमा पनि चिनिन्छन् त्यसकारण नरेशको दैनिकी र मासिक आम्दानीका बिषयमा पनि हामीले केही प्रश्नहरु गरेका छौ उनलाई । हेर्नुस् उनीसंग गरिएको कुराकानी ।